Obesejovwe wukulima ushiye enyuvesi - Ilanga News
Home Impilo Obesejovwe wukulima ushiye enyuvesi
Uthi intsha mayihlukane nobuvila nokuhlala ezinkundleni zokuxhumana
NGUSINETHEMBA Masinga waseMthebeni, eNdwedwe.
UBONGA ukwesekwa ngabazali esinqumeni esinzima asithatha sokushiya phansi izifundo zeBachelor of Science: Life and Earth Science ayesenza unyaka wesithathu kuzona e-University of KwaZulu-Natal (UKZN) ngoba eshiswa wubizo lokuba ngumlimi uSinethemba Masinga (22) waseMthebeni, eNdwedwe. USinethemba usenenkampani iSinesthembiso Produce, esikwazi ukukhiqizela isitolo esikhulukazi ukudla, iPick n’Pay. Okunye ukudla abakukhiqiza ensimini yakhe bakudayisa kubantu emigwaqweni. Uyala intsha ukuba iwasebenzise amathuba ewatholayo, kanti kulaba asebefunde bagogoda, uthi bangalindi ukuqashwa, kepha mabasukume, baziqalele amabhizinisi amancane abangaziphilisa ngawo kubalwa ngisho ingadi encanyana egcekeni. Uzeseka ngokuthi okuncane osuke ukutshalile, uthola isivuno esikhulu nxa sekuvuthiwe.
USIZWE WUKUBHEDUKA KWECORONA UKUFEZA IPHUPHO LAKHE Echaza ngokushiya kwakhe enyuvesi uSinethemba, uthi nakuba umkhakha abewenza ugxile kakhulu kumakhemikhali nakuma gciwane, okuyizinto ezivelayo kwezolimo, kodwa kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi wabona ukuthi le nto abeyifundela kayisuki ngaphakathi kuyena. Uthi lesi siqiniseko usithole ngesikhathi efunda esekhaya ngenxa yokudlanga kokhuvethe okwaphoqa ukuba leli zwe livalwe ngoNdasa (March) wango-2020. “Ngesikhathi ngifundela ekhaya, bengisiza abazali emasimini. Yilaphoke uphinde wabuya khona umuzwa wokushiya phansi ebengikufundela enyuvesi. Ngigcine sengihlalisa phansi abazali bami, ngabatshela ukuthi ngiyashiya. “Kakubanga yinto elula ngoba bengaziwa njengomntwana osebenza kanzima esikoleni. Nokho ngagcina ngishiye phansi ngonyaka wesithathu.” Uthi abazali bamkhululile ngoba bebona ukuthi wenza into ayithandayo yokuba ngumlimi, yize bebefuna ukuthi aqale ngokuba neziqu esandleni. “Nakuba ukubheduka kokhuvethe kulethe isikhathi esinzima kwabaningi kepha kimina sizenokuhle ngoba ngithole ithuba lokwenza ebengikufisa, okuyinto ebingeke yenzeke ukuba bengisenyuvesi.” esho.
WAZAMA UKUQALA IBHIZINISI ESASESIKOLENI, KWABHEDA
USinethemba uthi uthando lokutshala kakusiyona into eqhamuke esesenyuvesi, kepha ngisho esasesikoleni beluphila kuyena. Ngesikhathi efunda uGrade 10, uthi kwafika inkampani eyayifuna ukusiza abantu abasha abafisa ukungena emabhizinisini ukuba bawaqale. Naye wabambelela kepha izinto kazihambanga njengokufisa kwakhe. Uthi uyajabula ukuthi useze walithola manje ithuba lokufezekisa iphupho lakhe. Uyakugcizelela ukuthi kakusiyo into entsha kuyena ukuba semasimini. “Ekhaya ngikhule abazali belima, bebehlezi beya emasimini. Empeleni kangikaze ngibezwe bethi baya emsebenzini wokuqashwa ngomunye umuntu ngisho nangelilodwa ilanga,” kuchaza le ntokazi. Uthi kubo bekutshalwe amadumbe, ubhatata nommbila okuyizinto ezithatha isikhathi eside ngaphambi kokuba zivunwe. “Bengifisa ukuthi sibe nezitshalo esizokwazi ukuthi siziphilise ngazo, ezivunwa njalo, ngenxa yokuthi kulula ukuphila ngazo ngoba nemali ingena kalula.”
INKINGA YOKUSHODA NGOMHLABA WOKUTSHALA
Yilesi sizathuke esenze watshala imifino, utamatisi, ubrinjolo namakinati. Njengamanje uthi ikhasimende lakhe elikhulu yisitolo sakwa Pick ‘n Pay, kanti uphinde asekwe osomabhizinisi namalungu omphakathi. Nakuba izinto zimhambela kahle kepha uthi zikhona izingqinamba abhekene nazo, ubala ukungabi nawo umhlaba owanele, imakethe nokutshala ukudla okungafakiwe amakhemikhali. “Yize sinawo umhlaba kepha muncane, ngenhlanhla sinomakhelwane osiboleke owakhe ukuba siwusebenzise. Kodwa okubi ngalokho wukuthi uma esewudinga angawuthatha noma kunini. Kanti nezindawo esingathengisa kuzo nazziseyinkinga. “Yize sikuthola ukwesekwa kodwa kusenzima ukwenza abantu (bezimboni ezinkulu) bakholwe wukuthi singakwazi ukubanika abakudingayo yize siyipulazi elincane kwazise bafuna lawa amakhulu. Ukudla okukhuliswe ngaphandle kwamakhemikhali kakulula ukusebenza ngakho ngoba izilwane ziyahlupha, siyaphoqeleka ukusebenzisa imithi. “Lokhu sekuholele ekutheni insimu siyehlukanise phakathi, kube nokudla okufakwe amakhemikhali nokungawafakiwe,” esho.
UVUKA NGO-4H30 EKUSENI UNINA ESEVELE ESEVUKILE
Ngaphezu kwalokho, uthi unenkinga yamanzi, usebenzisa ithangi likajojo bese amanzi bewathutha ngezigubhu besebenzisa ibhala ukuze bachelele izitshalo. Yize esemncane uSinethemba kepha impilo yakhe yehluke kakhulu kontanga bakhe. Uthi kwesinye isikhathi kunzima ngisho ukuvuka ekuseni ngenxa yokukhathala. “Ngihlezi ngimatasa, usuku lwami luqala ngo-4h30 ekuseni kepha umama usuke esevuke kudala, esefunda iBhayibheli. Mina ngiyavuka ngigeze, ngiphuze ikhofi bese siqala usuku lwethu ngomkhuleko ngoba singabantu abangamaKrestu. “Ngemuva kwalokho siphuma namageja, uqale umsebenzi, sivune, sihambise ukudla kubanikazi, sidayise nasemgaqweni,” kuchaza le ntokazi ezwakala ngisho ixoxa ukuthi iwuphila ngaphakathi lo msebenzi.
ISELULEKO SAKHE ENTSHENI ENGAMAVILA
Uyala intsha ukuba iwasebenzise amathuba ewatholayo kanti kulaba asebefunde bagogoda, uthi bangalindi ukuqashwa. “Isizukulwane sethu singamavila, sihlala kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Kungasisiza kakhulu ukuthi ngisho noma sihlezi kuzona (izinkundla zokuxhumana) kepha sizisebenzise ngendlela ezosikhulisa, sigqugquzelane. “Ngiyazi ukuthi abaningi uma becabanga lo msebenzi bafikelwa wukungcola kuqala emqondweni, okumnandi wukuthi utshala okuncanyana kepha isivuno sikulethele okukhulu. Siyangcola impela kepha senza imali ethi mayicishe ifane neyabantu abasuke behleli emahhovisi.”
USEBENZA NAWO WONKE AMALUNGU OMNDENI WAKHE
Uthi abafuna ukungena kulo mkhakha kumele bazihluphe ngokufunda. Le ntokazi ithi seyiqashe abantu abathathu abaneziqu ngenxa yokuthi umsebenzi bebengawutholi. “Ngiyaye ngithi kakumele uzenyeze noma ngabe ufundile, zama indlela yokuziphilisa ngisho ngabe uqala ngengadi encane, ungalindi ukuqashwa. Nginethemba lokuthi engikwenzayo kuzogqugquzela abanye abaningi, kuthi nalabo abanolwazi babelane nabanye ngaphandle kokubakhokhisa,” esho. USinethemba uthi babebathathu emndenini wakhe kepha ngeshwa washona omunye umfowabo, manje usele nomfowabo oyedwa ongunjiniyela. Nokho nomfowabo ubuye afake isandla uma sekuvunwa, ikakhulukazi uma kungamakinati. Kanti uyise, unina nokhulu wakhe nabo bayingxenye yokusebenza kwepulazi.
Previous articleWaxoshwa wumndeni ophase u-matric ena-31
Next articleUZOVEZA UHLANGOTHI OLWEHLUKILE KWI-DIEPCITY